ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ယမုံနာငါး ဂင်္ဂါငါး အစာဟပ် ပြိုင်ကြရာဝယ်”
အရပ်ထဲမှာ ဘာပဲလုပ်လုပ် မိုက်ခ် ကိုင်ပြီးပြောရ၊လုပ်ရတာကိုကြိုက်တဲ့ လူတွေ ရှိကြလို့ ကိုမိုက်ချစ် လို့ခေါ်ယူရတဲ့ လူတွေဒုနဲ့ဒေးပဲ။ နောက်ပြီး ဗေထိဗေထိ အသံကြားတာနဲ့ က ချင်ကြတဲ့ လူတွေလည်းရှိသေးတယ်။
တချို့ ကလဲ လုပ်တာထက်အော်ပြနေတာက ပိုများနေတာပဲ။ သိပ်မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တွေကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းဖြစ် မင်းသားကြီး Syndrome လို့ခေါ်ရမယ်ထင်တာပဲ။
ကိုပေါရေးထားတာဖတ်ပြီး ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတွေ လွမ်းသွားတယ်...။
အခု သီတင်းကျွတ်... တန်ဆောင်မုန်း ပြီး နတ်တော်လဆိုရင် စာပေဟောပြောပွဲတွေ လုပ်နေကျအချိန်နော်...း((
ကျမလဲ ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတွေ လွမ်းမိသွားတယ်။
"သံပုရာသီး တလုံးငါးပြား၊ ဆယ်ပြားဖိုးသုံးလုံး ..." ဆိုတာကို အသံနဲ့ဟန်နဲ့ ဆိုပြတဲ့ ဆရာ့ပုံစံ ခုထိ မြင်ယောင်မိနေတုန်းပဲ။
တကယ်တော့ ကိုပေါရယ် ... ငါးများများမိချင်တဲ့သူတွေကတော့ ပိုက်ကွန်နဲ့ ပစ်ဖမ်းကြတာပါပဲ။ အစာနဲ့မျှားတာကတော့ တခါမျှားရင် တကောင်ပဲ မိမှာလေ။ ပြီးတော့ ကျမတွေးမိတာ ... တချို့ငါးတွေရဲ့ အစာကလဲ ငါးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ ရေထဲကငါးလဲ ဇာတ်တူသားစားတာပဲကိုး။ စွန်တွေ သိန်းတွေ လင်းတတွေလဲ ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးတွေကို စားသလိုနေမှာပေါ့နော်။ ဘယ်လောကမဆို ဒီလိုပဲ ထင်ပါရဲ့။
ဒါနဲ့ ဟိုတလောက ယားတာ သက်သာသွားပြီလား ...။ ကွန်မန့်မရေးဖြစ်ပေမဲ့ မကြာမကြာ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား လပြည့်နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ မွေးနေ့မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
>>>Htun…. ပတ်မကြီး ထိုးဖောက်တတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါသေးသဗျား။
>>>သက်ဝေ…. ဟုတ်တာပေါ့။ စာပေဟောပြောပွဲရာသီ နီးလာပြီ။ အရင်တုန်းကဆိုရင် အခုလောက်ဆို ကော်မတီတွေဖွဲ့၊ ရန်ပုံငွေတွေဘာတွေ ရှာကြပေါ့။ ပြောသာပြောရတာပါ၊ ကျနော်က စာပေဟောပြောပွဲကို အပြင်မှာ နှစ်ခါလောက်ပဲ နားထောင်ဖူးတယ်။ ဆရာအောင်သင်းရဲ့ ဟောပြောပွဲတွေကို ကက်ဆက်ခွေ၊ ဗီဒီယိုခွေတွေထဲမှာ နားထောင်ဖူးတာပါ။
>>>Maydarwii…. ပိုက်ကွန်နဲ့ သိမ်းကြုံးဖမ်းရင်တော့ မဆိုင်သူရော ဆိုင်သူရော တပြုံလုံးကြီး မိသွားတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ ကြည့်ရတာ သမင်နဲ့ကျား၊ လေးသမားနဲ့သားကောင် မေတ္တာနှောင်ပုံကလည်း ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကပဲနဲ့ တူပါတယ်။ အခုခေတ်က မမေဓါဝီပြောသလို ကလိယုဂ်ခေတ်ကြီးမို့ ထင်ပါရဲ့။
ဒါထက်…. ယားလက်စ မကုန်သေးဘူးခင်ဗျ။ တချက်တချက် စည်းစိမ်ပေးနေတုန်းပဲ။ အရင်ယားတဲ့နေရာတွေကတော့ တချို့လူတွေ ရေချိုးပြီး အရေပြားလဲသလို အလွှာလိုက် ကွာကျသွားပြီ။ သမီးကတော့ “ဖေဖေ့မှာ Cotton တွေ ပွင့်နေပြီတဲ့။”။ အရေပြားလဲပြီးရင် အသားဖြူလာမလားလို့ မျှော်လင့်နေတယ်။း-)
Happy Birthday Ko Paw!
ကိုပေါရေ Happy Birthday ပါ။ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ အဘ်ိဓမ္မာ အခါတော်နေ့နဲ့ မွေးနေ့လာတိုက်နေတာ တော်တော် ကုသိုလ်ထူးတာပဲ။ မွေးနေ့အမှတ်တရ ပို့စ်ပေါ့နော့်။ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်တော့တိုတိုရေးလို့ မဖြစ်လုိ့ အချိန်မရလို့ မပေးတော့ဘူး။ အရင်ပို့စ်တွေလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပဲ အချိန်က အကန့်အသတ်ဖြစ်နေလို့ မှတ်ချက်မရေးဖြစ်ဘူး။ နှုတ်ဆက်ဖို့ C-Box လည်းမရှိဆိုတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖတ်ပြီး ပြန်ပြန်သွားတယ်။ မွေးနေ့နှစ်တရာတိုင်အောင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာကောင်းကောင်းတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
Nge Naing.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရေးစရာတွေ ရှိနေသေးတဲ့အထိ၊ ရေးဖို့အခြေအနေပေးတဲ့အထိ ဆက်ရေးသွားမှာပါ။
Yu Wa Yi ..... Thanks. :-)
Happy birthday Ko Paw! May you be more productive in writing constructive posts from this very special days :D! Of course, your well-being does matter most, without which we cannot seeaproductive Ko Paw. Cheers brother!
ဘာပြောပြောသူတို့ကနှစ်ထောင့်တစ်ဆယ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲ ပါချင်တဲ့လူတွေကလဲတန်းစီလို့ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ လုံးဝ ပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့ ခင်ဗျားထင်သလား nld ကဝင်မပြိုင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲအလွန် nld ရဲ့ ရပ်တည်မူ့ကမေးခွန်းထုတ်စရာပဲ ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမကောင်းးမှန်းလဲလူတိုင်းသိတယ် ဒါပေမဲ့ မေးခွန်းကဒါပြီးရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ဒီလိုပဲ ဖိနပ်နဲ့ပေါက်လိုက် ဆဲလိုက် အင်တာနက်တို့ ဘီဘီစီတို့ကနေ လေကန်နေလို့ကတော့ ရင်လေးတယ် နောင်နစ်နှစ်ဆယ် ပြောရရင်ခင်ဗျားပြောတဲ့ ငါးစားပဲမြင်တဲ့လူတွေက အရင်ကကို့ဖက်ကလူတွေ
ကျော်ထင်..... ကျေးဇူးပါ။ ရေးဦးမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလေးထွန်းကားတာ မြင်သွားချင်ပါသေးတယ်။း-)
Anonymous ..... မိတ်ဆွေပြောတဲ့အကြောင်း(၂ဝ၁ဝ) နဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ထပ် ပို့စ် သပ်သပ် ရေးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ကြားထဲမှာ တခြားပို့စ်တွေ နည်းနည်း ခံကောင်းခံနိုင်တယ်။
I amaregular reader of your blog. Sometimes, I agree with your writing but sometimes not. Anyway,I like your writing.
Mar Mar .... Thank you. I like your comment.
Yes, it is very natural that we all can't agree on everything. And it is impossible for us to agree on everything. It is the greatest form of tolerance if we can live peacefully side by side even though we have different thoughts and have freedom to express them. This kind of tolerance can be found in democratic and free societies, but not in feared societies.
Thank you for birthday wish and for reading my posts.
happy birthday ပါကိုပေါ..
မှန်ပြောင်းရှင် ..... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါထက်.... နာမည်ကြားရတာ ကြက်သီးထလိုက်တာ။ ဟိုဖက်တိုက်ကနေ တို့ကို လာမချောင်းနဲ့နော်။